Waraysi xasaasi ah oo aan la yeelanay Muse Bixi iyo Abdirahman Cirro. | Awdalpress.com
Waraysi xasaasi ah oo aan la yeelanay Muse Bixi iyo Abdirahman Cirro.
Waxa Daabacay staff-reporter on Oct 1st, 2017 and filed under Daily Somali News. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.
Awdalpress – London – Waraysi xasaasi ah oo aad arki doonaantaan marka aad akhrisataan, ayaan la yeelannay Musharraxiinta Madaxweyne ee Kulmiye iyo Waddani. Waraysigaa oo xiisa badan, horena aan loo sii shaacin ayaa sidan u dhacay.
AWDALPRESS: Abdirahman iyo Muse subax wanaagsan.
MUSE BIXI: Wanaagsan.
ABDIRAHMAN CIRRO: Subax wanaagsan.
AWDALPRESS: Maxaad isku soo sharraxdeen ee aad dadka iyo dalka u qaban doontaan?
ABDIRAHMAN CIRRO: Anigu keliday wax ma qaban karo, haddaan dadku ila shaqayn.
MUSE BIXI: Anigu dadka iyo dalkaba sharci ayaan ku dhiqi doonaa.
AWDALPRESS: labadiinnuba sax baad tihiin, jawaabuhuna mid kaliya ayuun bay ku habboon yihiin.
AWDALPRESS: Laakiin bal waxad ii sheegtaan tallaabooyinka ugu horreeya ee aad qaadi doontaan.
MUSE BIXI: Su’aashaadu way gaagaaban tahay, ee faah faahi. Haddii aad u jeeddo 100 casho ee ugu horreysa, ee madaxweynayaasha cusubi ku xisaabtamaan, dee caawa oo dhan ka bixi mayno. Balse saddexda tallaabo ee ugu horreysa aan kuu sheego;
1.Dawlad xul ah oo ay wasiirro ka yihiin dad aqoon, sumcad iyo karti leh oo kooban ayaan soo dhisi.
2. Gole aqoonyahanno ah oo talada dalka lagu maamulayo saxa, la xisaabtama hay’adaha oo aan ka talo qaato ayaan samayn.
3. Saxaafadda, Suldaannada iyo hay’adaha madaxa bannaan ayaan sharci xakameeya u samayn doonaa. Si aanu dalku u noqon mid laga wada taliyo. Oo dawladda la garab ordo.
4. Tu afraad aan ku darsadee, Caasimadda Hargeya iyo Caasimadaha gobollada ayaan u dajin lahaa sharci lagu hagaajiyo quruxdooda, bii’adooda iyo nadaafaddooda.
ABDIRAHAM CIRRO: 1. Anigu sida saaxiibkay sheegay waxan dhisi lahaa dawlad tayo leh, oo aan weliba qabiil ku salaysnayn. Nin jeclaysina ku salaysnayn. Wasaaradahoodana u madax bannaan ee aan hoos iman madaxtooyada.
2. Hay’adaha garsoorka ayaan ku xijin lahaa, oo aan u magacaabi lahaa dad aqoonteeda iyo sumcaddeeda leh.
3. Sidii loo soo celin lahaa hantidii qaranka laga dhacay ayaan guddi u saari lahaa.
4. Salaadiinta dalka wareerisay askaxoodaan qaadi lahaa.
AWDALPRESS: Abdirahman ma waxad u jeeddaa Salaadiinta feedh baan kala daali lahaa.
ABDIRAHMAN CIRRO. Maya, waataan feedhkii iska daayey kkkkkkkk
AWDALPRESS: Muse maxaad horta cirka u eegtaa, bal mar uun miyaad i soo eegtid, si aan u akhristo dareenka wajigaaga.
MUSE BIXI: Adeer ma waraysi ayaad noogu yeedhay mise waad na dacaayadaynaysaa, miyaanad ogeyn in aan madaxweyne noqonayo maalin dhaw. Oo ay dhaartii uuni ii dhiman tahay.
AWDALPRESS: Muse weli doorashadii lama gaadhin, adiga iyo Abdirahmanna midkiin soo bixi doona ma sheeg karo. Laakiin waxan kaa codsanayaa in aad waraysigayga u yara adkaysato.
ABDIRAHMAN CIRRO: Wariye, aniga ayaa wax walba in aan ka jawaabo diyaar u ehe, Muse iska daa, waa xanaaq dhaw yahaye, oo weliba ducadana xataa ma qaato. Dagaal buu ka xigaa kkkkkk.
MUSE BIIXI: Weriye weli miyaad i aragtay aniga oo feedhtamaya amma sida Xirsi toorray ku eryanaya nink xafiiska iigu soo gala. Ta kale weligay maalibaa kalmad afku iga xaday. Oo waa taasi ducada ah, immigase ducada ayaan ugu jecelahay.
ABDIRAHMAN CIRRO: Anigaba maalintaa la sheegayo, feedh ninkaa reer Sool ahi uu igu soo waday ayuun baan iska difaacayey, ee kamaradda ayuun baa aniga I qabatay.
AWDALPRESS: Intaasi kaftanku ha innoogu joogee, su’aashayda ugu danbaysaana waa laba qaybood.
1. Midi waa su’aal daarran sida aad u kala aragtaan qabsoomidda doorashada.
2. Ta labaadna waa mid daarran, marka natiijadu soo baxdo in aad ku qanci doontaan iyo in aad muran gelin doontaan.
ABDIRAHAMAN CIRRO: Horta Ilaahay doorasho xor ah oo xalaal ah ha innoo suurta geliyo, waxanse filayaa kulmiye na boobi doono amma khiyaamo uu nala maaggan yahay. Cabsi badan ayaanan ka qabnaa haddii aan nahay Waddani iyo UCID.
Ta kale aniga iyo musdanbeedkaygu kuma qancayno haddii aan si xor ah oo xalaal ah loo tirin codadka. Taasina waxa ay keeni kartaa in dalku kala go’o. Amma xaalad ammaan darro ay la soo daristo dalka.
MUSE BIIXI: Dalkeenu maanta meel fiican ayuu marayaa, doorashooyin badan ayaana innoo soo qabsoomay, tanina kuwii soo qabsoomay ayuun bay la mid tahay. Waxanan rajaynayaa in ay si fiican innogu qabsoomi doonto.
Ta labaad anigu Muuse ayaan ahayoo, dalkana rajo ayaan ka qabaa, haddii doorashada la iga helana waan oggolaan, laakiin Abdirahman waxan uu sheegayo ma garanayo, malaha dadka iska wareersan ayuu hadalladood suuqa ay kaga sheekaystaan soo maqlay. Dal kala go’aya iyo wax dhici doonaana ma jirayo. Ilaahay naguma keeno.
MUSE BIIXI: Weriye adiga siday kula tahay?
AWDALPRESS: Anigu adiga ayaan ku warsanayaa, oo su’aashaadaa kama jawaabi karo. Waanad ku mahadsan tihiin
waraysiga aad naga oggolaateen.
MUSE BIXI: Mar baad si gaar ah ii waraysan doontaa.
ABDIRAHMAN CIRRO: Waad mahadsan tahay weriye.
La soco waraysiga xigaa waa Abdiraham Zaylici iyo Mohamed Ali.
This post has been viewed 6831 times.